I-china 2021 yokuthengisa okushushu i-D-ring Amabhande eQhelesi oQeqesho weQatha lomSebenzi wokuSebenza ngokuQiniseka kokuQiniseka koMenzi kunye noMthengisi | NQ
I-Ankle / Umtya weSandla yindlela efanelekileyo yokufaka ukusebenza kwemilenze kwiiBhendi zakho zoKhuselo ezikhoyo.
Indawo ekujoliswe kuyo yeMisipha: Umva, iiTriceps, uMzimba opheleleyo, imilenze, iingalo
Iimpawu: icwecwe, kulula ukuyigcina.
Beka ibhendi ngaphezulu kwamadolo kwaye uthathe amanyathelo amade uye phambili, ngasemva nangasemva. Ngaba uyakufudumala ngokugqibeleleyo ngokuhamba, ukuphakamisa, ukuphakamisa amandla, ukolula, ukuqhekeza kunye nakho konke ukusebenza kwemilenze. Ukuzifudumeza kuthintela ukwenzakala ngexesha lokuzilolonga kwaye kunegalelo kwindlela yokuphila esempilweni. Sebenzisa la mabhetyebhetye athambileyo okolula imilenze, ukubengezela kunye nokunyonga kuphucula yonke imiba yezempilo.
Sebenzisa i-hip flex yakho ngaphambi kokuba usebenze njengokufudumala ukuze usebenze imisipha yakho, ngexesha lokuzivocavoca ukukunceda ukugcina ifom kunye nokubonelela ukuxhathisa, ukuqinisa, kunye ne-toning, okanye emva kokuzivocavoca kwakho ukubuyisela kunye nokwelula.
Inombala oBomvu, oBomvu / oMnyama / uBlue / uBlack / oMnyama ... Isiqwenga se-1. Ibhendi yomzimba webhola yithandwa kakhulu kulo nyaka kwaye umgangatho wethu ulunge kakhulu.
1. Kwizixhobo ezincinane zokuzivocavoca, nganye kwingxowa ye-PP kwaye ezininzi zifakwa kwibhokisi yebhokisi;
2. Ukupakisha okuzimeleyo kwenzelwa iimveliso ezinzima, nganye kwi-600 ~ 800kg kwityala leplywood. (ayizizo iinkuni zokwenyani, zilungile ukuhanjiswa kwi-AU naseYurophu);
3.Thetha-thethana ngendlela yokuhambisa kunye nabasebenzi.
1. INkonzo yobuNgcali
2. MOQ esezantsi
3. Ukuhanjiswa okukhawulezayo
4. Isiqinisekiso Somgangatho
Uyilo kunye nokwenza iimveliso ngokukodwa kwabasetyhini abaphila ubomi obusebenzayo nobusempilweni. Sikholelwa ngamandla ekuboneleleni abasetyhini ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu ezikhululekileyo kwaye ezimnandi ukuzisebenzisa yonke imihla! Musa ukulungelelanisa ubungakanani obufanayo buhambelana namadoda nabasetyhini ngokulinganayo, kuba akuyinyani. Endaweni yoko, zama iimveliso zethu kwaye siqinisekise ukuba uya kuzithanda! Kwaye, zipinki. Ngubani ongayithandi ipinki?!
Egqithileyo Intambo yokulwa i-Poly Dacron yokuQinisa iiNdawo zokuThoba umzimba i-Gym Muscle Toning yoQeqesho lwaMandla oQeqesho
Okulandelayo: I-NQ yeMidlalo engenaManzi i-Eva Gym Foam Eco Friendly High Density Premium Cork Yoga Block
Amabhanti e-Ankle ahlengahlengiswayo